सिरानचोक गाउँपालिकाद्वारा कक्षा आठको बार्षिक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
सिरानचोक गाउँपालिकाद्वारा कक्षा आठको बार्षिक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक
Published On : २१ बैशाख २०७७, आईतवार १९:३८
गोरखाको सिरानचोक गाउँपालिकाले जिल्लामै पहिलो पटक आधारभूत तहको बार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरेको छ ।
गत फागुन २८ गतेदेखि सञ्चालन भएको गाउँपालिकास्तरीय परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु गुरुङले जानकारी दिए ।
गाउँपालिकाभित्र रहेका २० वटा विद्यालयका चारसय ३८ जना परीक्षार्थीको आइतबार नतिजा प्रकाशन गरेको अध्यक्ष गुरुङले बताए ।
१.६ जिपिए ल्याउने परीक्षार्थीले माथिल्लो कक्षामा पढ्न पाउने परीक्षा समितिले निर्णय गरेको छ । दुईवटा विषयमा १.६ जिपिए नल्याए पुन परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । नतिजाप्रति चित्त नबुझे एकसाताभित्र पुनर्योग गर्न पाउने व्यवस्था गाउँपालिकाले गरेको छ ।
विद्यालय तथा परीक्षार्थीले आईएमआईएस प्रविधिमार्फत नतिजा तथा मार्कसिट हेर्न पाउने व्यवस्था गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष गुरुङले बताए । परीक्षार्थीले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण सच्याउन चाहेमा विद्यालयको सिफारिस सहित निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको पनि उनले बताए ।
गाउँपालिकाले अन्य कक्षाको बार्षिक परीक्षाको नतिजा बुधबार सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । साथै स्वास्थ्य सावधानी अपनाई बैशाख मसान्तसम्म घरदैलो कार्यक्रम गरी विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाउने र पाठ्यपुस्तक पनि बाँडिसक्ने योजना बनाएको अध्यक्ष गुरुङले बताए ।